🥇 ▷ Isbarbardhiga sawirka habeenkii ee u dhexeeya iPhone 11 Pro iyo iPhone XS ✅
Isbarbardhiga sawirka habeenkii ee u dhexeeya iPhone 11 Pro iyo iPhone XS
Mid ka mid ah horumarka weyn ee iPhone 11 Pro waa kamarad gadaal saddex-laab ah, Apple wuxuu ku faanayaa waxbadan kamaradiisa cusub iyo qaababkiisa cusub, laakiin ilaa iyo hadda maanaan arag isbarbar dhig dhab ah oo udhaxeeya hab dhaqanka habeenkii ee balanqaadka ee iPhone sanadkan iyo kuwii sanadihii hore.
Tan iyo markii muuqaalkii ugu horreeyay ee iPhone cusub ay soo muuqdeen, John Gruber oo ka tirsan Daring Fireball ayaa is barbar dhigay sida iPhone 11 Pro uga faa’iideysto qaabkeeda Habeenki cusub marka la barbar dhigo iPhone XS. Natiijooyinkuna waa kuwo cajiib ah.
Habeenkii Mono ee iPhone 11 waa mid la yaab leh
Sanado badan kamaradu iPhone ayaa ku dembaabay dhinac gaar ah: sawirro iftiin yar. Apple waxay go’aansatay inay dhigto baytariyada sanadkaan qaab habaysan oo habeenkii ah oo tusaya faahfaahino cajiib ah markii nalku hooseeyo iyada oo sawirradu aysan u muuqan kuwo dabiici ah ama aan dabiici ahayn.
John Gruber wuxuu soo qaatay tusaalooyin, tus bidix waxaan haynaa natiijooyinka ka soo go’ay iPhone 11 Pro, dhanka midigna toogasho ay qabteen iPhone XS.
Labadan tusaalood ka sokow, waxaan sidoo kale leenahay war wanaagsan maxaa yeelay Thanks Habeenkii waxaan hadda sameyn karnaa sawirro leh tayo aad ufiican. Labada iPhone X iyo XS labaduba waxay adeegsadeen qalabka dareenka telephoto si ay u qaadaan sawirrada, dhibaatada ayaa ah in tani ay ahayd f / 2.4, IPhone 11 cusub waa mid ifaya oo leh aperture f / 2.0, markaa waxay siisaa natiijooyin aan caadi ahayn mar labaad.
Way ku xiisi kartaa | iPhone 11 vs iPhone XS: waxkasta oo isbadalay intii u dhaxaysay labada qarni
Si loo gaadho natiijooyinka noocan ah oo leh kamarad xirfad leh waxaan u baahanahay inaan lahaano sode maadaama sawiradu qaadan karaan 1, 2 ama 3 sekan in la qaato, waxay kuxirantahay waqtiga soo qaadashada aan u baahanahay. Haddii aan si lacag la’aan ah u sameeyno, waxay u badan tahay in sawirradu ay giijisteen.
Si kastaba ha noqotee tani waa wax aan dhicin oo ku dhaca Habeenkii Habeenkii ee “iPhone 11 Pro”. Kaliya waa inaad dhaqaajiso waana awoodaa qaado sawirro gacanta ku haya aaladda, nidaamku wuxuu mas’uul ka noqon doonaa inuu saxo kala duwanaanshaha wuxuuna na tusi doonaa natiijooyin la yaab leh.
Apple ah waxaa la siiyay a weyni wuxuu ku booday sanadkan cusub ee iPhone 11 iyo 11 Pro Ilaa hadda sawir qaadista, wax u badan tahay in aaladihiisa cusub ku ridayaan miiska dushiisa marka laga hadlayo kamaradaha.